कोलकत्ता बासी नेपालीहरू द्वारा मेलम्चीका बाढी पिडीतहरूलाई आर्थिक सहयोग
श्रावण २३ काठमाडौं । संयुक्त नेपाली केन्द्रीय सेवा संघ कोलकाता श्री श्रीजानकी माता नेपाली धार्मिक संघ,श्री गोरखनाथ सेवा समिति, नेपाली जनकलयाण समिति, प्रवासी नेपाली समाज सेवा संघ, जगत सुधार बौद्ध समिति, श्री सत्यवती धार्मिक नेपाली समिति, सूर्य उदय नेपाली समिति यस संस्था तथा संयुक्त नेपाली केन्द्रीय स...
नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न नपाए आन्दोलन गर्ने विद्याथीहरुको चेतावनी
श्रावण २१, काठमाडौं । कोरोना महामारीका बेला चीनबाट इन्टर्नसिप गरेर फर्केका एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले नेपालबाटै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । नेपालबाटै इन्टर्नसिप पूरा गर्न पाउने व्यवस्था नगरे आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ । चीनमा अध्ययनरत मेडिकल इन्टर्नसिप विद्यार्थीहरुले...
सेनाद्धारा मनाङका बाढीपीडितलाई राहत वितरण
श्रावण १८, मनाङ । मनाङका बाढीपीडितलाई ३० लाख रुपैयाँ बराबरको राहत उपलब्ध गराएका छन् । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस मनाङका सभापति टेकबहादुर गुरुङ, सांसद कर्म घले र प्रदेशसभा सदस्य चिन्ताबहादुर घलेले राहत उपलब्ध गराएका हुन् । प्रत्येक घरलाई दाल, चामल, तेल, नुनलगायतका खाद्य सामग्री उनीहरुले राहत...
भेटियो छिन्नमस्ता देवीको मुकुट
श्रावण १८, मुलुक्कै प्रसिद्ध शक्तिपिठ सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवतीको चोरी भएको मुकुटसहित एक जना पक्राउ परेका छन् । विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का राजेश मण्डललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आइतबार साँझ करिब ७ बजे छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा रहेको छिन्नमस्ता (शखरेश्वरी) भगवतीको चाँदीको मुकुट, नथिया...
सर्वसाधारणका लागि आएको खोप होटलमा भेटिएपछि
श्रावण १६, सर्वसाधारणका लागि आएको खोप होटलमा भेटिएपछि छानबिनको माग गर्दै विद्यार्थीको समूहले शनिबार विर्तामोड नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेको छ । शुक्रबार विर्तामोड स्वास्थ्य शाखाका फोकल पर्सन ओमबहादुर खड्का १०३ भाइल खोपसहित होटल टाइमलेसमा भेटिएका थिए । उनीमाथि होटलमा खोप लुकाउन लगेको आरोप लागे...
खिर खाएर मनाइँदै श्रावण १५
श्रावण १५, काठमाडौं । आज नेपाली समाजमा खिर खाएर मनाइँदै छ । वर्षा ऋतुका बेला असार १५ गते दही च्युरा र साउन १५ मा खिर खाने प्राचीनकालदेखिको नेपाली परम्परा रहेको छ । साउने झरी पर्ने बेलामा तातो खिरले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने भएकाले खिर खाने गरिएको हो । दूधमा मरमसलालगायत चिजबिज हालेर बनाइने खिरले स...
श्रावण १३, काठमाडौं । अहिले नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ३ सयले बढेको छ । बुधबार सुन तोलामा ३ सयले बढेर ९२ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ। तेजावी सुनको मूल्य ९१ हजार ६ सय कायम गरिएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्यमा भने सामान्य गिरावट भएको छ। आज चाँदी तोलाको १२ सय...
विश्वासको मत लिन्छौं– प्रवक्ता चौधरी
श्रावण १२, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले सरकारले विश्वासको मत लिने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री चौधरीले विपक्षी दलहरुले सरकार अल्पमतमा रहेको र अवैधानिक रहेको आरोप लगाइरहेकाले सरकारले विश्वासको मत...
निर्वाचन आयोगमै जाने भए रेशम चौधरी
श्रावण ११, काठमाडौं । जेलमा रहेका जसपाका नेता रेशम चौधरी निर्वाचन आयोगमै उपस्थित भएर हेड–काउन्टमा सहभागी हुने भएका छन् । यसअघि उनको हस्ताक्षर जेलबाटै लिने तयारी भए पनि चौधरीले त्यसलाई आयोगमै उपस्थित हुने अडान लिएका थिए । त्यसपछि आयोगले दोस्रो पत्र पठाएर चौधरीलाई उपस्थित गराइदिन कारागा...
श्रावण ११ ,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो ३ बजे बस्न लागेको हो। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु र दैनिक प्रशासनिक काम कारबाहीबारे छलफल हुने जनाइएको छ । हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री देउव...
स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए उमेश श्रेष्ठ
श्रावण १०, काठमाडौं । सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै रहने गरी आइतबार श्रेष्ठलाई राज्य मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोकेको राष्ट्रपति कार...
युथ फोर्सद्धारा शक्ति प्रदर्शन
श्रावण ९, काठमाडौं । नेकपा एमालेको युवा संगठन युथ फोर्सको काठमाडौं उपत्यकास्तरीय समिति (भ्याली कमान्ड) शनिबार घोषणा हुँदैछ । माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर हुँदै युथ फोर्सको ¥याली कार्यक्रमस्थल बबरमहलस्थित कार्की ब्यांकेटमा पुगेर सभामा परिणत भएको छ भने उक्त सभामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी श...
भोलिदेखि लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्न, काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको अनुमति
साउन ८ , काठमाडौं । भोलिदेखि मध्यम तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैले निर्णय गरेको छ । यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन प्रशासनले यातायात व्यवसायीहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ । प्रशासन कार्यालयकी प्रशासक लक्ष्मीकुमारी शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएक...
यी चार अस्पतालको खोप कार्ड प्रमाणीकरण
साउन ८, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका चार अस्पतालबाट कोरोना खोप लगाएका नागरिकको खोप कार्ड प्रमाणीकरण सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तरगतको खोप महाशाखा प्रमुख डा. झलक गौतमका अनुसार सचिवस्तरीय निर्णयले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालसहित सिभिल अस्पताल, प...
देउवा जनादेशकै प्रधानमन्त्री :रमेशजंग रायमाझी
साउन ७ , काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जनादेशकै प्रधानमन्त्री भएको राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै रायमाझीले प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री भएको बताएका छन्। १४६ जना सांसदले समर्थनमा हस्ताक्षर...
नेकपाका संस्थापक पुष्पलालको स्मृति दिवस मनाइँदै
साउन ७ , काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको ४३ औं स्मृति दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी विभिन्न ठाउँमा मनाइँदै छ । स्मृति दिवसको अवसरमा आज दिउँसो एक बजे तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ,त्यस कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली...
माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै
साउन ६, काठमाडौं । सरकारमा जाने मन्त्रीहरुबारे निर्णय गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक आज बैठक बोलाइएको हो । पेरिसडाँडामा बस्ने दिउँसो २ बजे बैठक पार्टी कार्यालय स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले जानकारी दिएका हुन । बैठकमा पार्टीको आन्तरिक जीवन र सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको बारेमा छलफल हु...
आज प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता
साउन ५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच भेटवार्ता भएको छ । मंगलबार बिहान नेकपा एमाले का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेटेपछि प्रचण्डले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भे...
पहिरो पीडितको समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
साउन ५,काठमाडौं । मनाङको चामेको पहिरो पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री खाँणले सोमबार मन्त्रालयमा सरोकारवालासँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन् । छलफलमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, नेपाली सेनाका रथी प्रभुराम शर्मा, प्रहरी म...
आजबाट लगाइँदै जोन्सन एण्ड जोन्सन
साउन ४, काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाललाई दिएको जोनसन एण्ड जोनसन कम्पनीको कोरोनाविरुद्धको खोप आजबाट लगाइने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार खोप पुग्न बाँकी रहेका दुर्गम जिल्ला बाहेकका सबै जिल्लाहरुमा आजबाट खोप लगाउन सुरु हुने भएको छ । अमेरिकाले कोभ्याक्स का...